Maktabada Kheyraadka - Xarunta Kheyraadka Gabowga & Naafada (ADRC)
Kheyraadka u doodista
Khamriga & Maandooriyeyaasha Kale (AODA)
211 Khadka Caawinta Bulshada
Kala guurka dhalinyarada ee dugsiga sare
Buug -yaraha ADRC - Ingiriis
ADRC Tsab Ntawv - Hmong
ADRC Folleto - Español
Xuquuqda Naafada Wisconsin
Shabakada U doodista Gabowga ee Wisconsin (WAAN)
Gudiga Wisconsin ee Dadka Naafada Koboca
Isbahaysiga Badbaada ee Wisconsin
ABC ee Caafimaadka
Golaha Qaranka ee Duugista (NCOA)
Xarunta Xuquuqda ee Medicare
Khamriga & Kuwa Kale
Balwadaha Daroogada (AODA)
Bilaabashada Bilaabashada AODA
Buug -yaraha "socda" dadka ka welwelsan qof qaba balwad iyada oo loo marayo heerarka kala duwan ee adeegyada laga heli karo Degmada Brown. Wuxuu sharxayaa codsiga ku habboon ee adeegyadan, sida loo helo, iyo ikhtiyaarada maalgelinta iyo lacag -bixinta.
Helitaanka Caawinta - Adeegyada Daaweynta AODA
Liistada hay'adaha bixiya adeegyada khamriga iyo daweynta maandooriyaha kale.
Kheyraadka Bulshada Degmada Baahiyaha Aasaasiga ah
Buug yar oo leh sharraxaad iyo macluumaadka xiriirka ee bixiyeyaasha adeegga ee dadka raadinaya adeegyada si ay ula kulmaan baahidooda aasaasiga ah. Waxaa ka mid ah cuntada, hoyga, daryeelka carruurta, shaqada, caafimaadka, gaadiidka, iwm.
Barnaamijka Taleefanka gacanta ee Dowladda oo bilaash ah
Barnaamij la yiraahdo Lifeline oo bixiya adeeg taleefoon gacmeed lacag la'aan ah oo qiimo jaban loogu talo galay macaamiisha dakhligoodu hooseeyo.
Barnaamijka Cashuur celinta ee Homestead
Loogu talagalay in lagu caawiyo qoysaska dakhligoodu hooseeyo in ay dejiyaan saamaynta dhaqaale ee cashuuraha guryaha iyo kirada. U-qalmitaanka barnaamijka wuxuu ku saleysan yahay shuruudo gaar ah oo ay ku jiraan dakhliga, xaaladda shaqada, da'da, iyo naafonimada. Booqo websaydhka Waaxda Wisconsin ee Dakhliga u-qalmitaanka iyo macluumaadka dalabka.
Barnaamijyada Caawinta Canshuuraha Dakhliga
Deganayaasha Wisconsin waxay ka faa'iideysan karaan laba barnaamij oo loogu talagalay inay ku siiyaan caawimaad cashuur dadka waayeelka ah ee dakhligoodu hooseeyo iyo dadka naafada ah. Barnaamijka Caawinta Cashuurta Dakhliga Tabaruca (VITA) waa iskaashi u dhexeeya Adeegyada Dakhliga Gudaha (IRS) iyo Waaxda Dakhliga ee Gobolka Wisconsin (DOR). Barnaamijka La-talinta Canshuuraha ee Waayeelka (TCE) waxaa maal galiya aasaaska Ururka Mareykanka ee Dadka howlgabka ah (AARP). Labada barnaamijba waxaa ka shaqeeya mutadawiciin ay tababaraan IRS iyo DOR si ay ugu diyaariyaan cashuur celinta dakhliga aasaasiga ah bilaash. Booqo websaydhka WI DOR ee u-qalmitaanka iyo goobaha.
Barnaamij federaal ah ayaa loo sameeyay si loo joojiyo gaajada loona hagaajiyo caafimaadka iyo nafaqada. Waxay ka caawisaa qoysaska iyo shakhsiyaadka u qalma dakhliga inay iibsadaan cuntada ay ugu baahan yihiin caafimaad wanaagsan. Nidaamka dalabka waxaa ka mid ah wareysi taleefan oo lala yeeshay Bay Lake Consortium iyo codsi khadka tooska ah ah. Wac Bay Bay Consortium 1-888-794-5747 maanta si aad u hubiso u-qalmitaanka una buuxiso wareysigaaga taleefanka.
Barnaamijyada AFCSP & NFCSP
Barnaamijka Taageerada Daryeel-bixiyaha Qoyska Alzheimer (AFCSP) iyo Barnaamijka Taageerada Daryeel-bixiyeyaasha Qoyska ee Qaranka (NFCSP) waxay siiyaan taageero maaliyadeed daryeelayaasha qoyska ee u-qalma.
Liiska adeegyada si gaar ah loogu talagalay in lagu taageero daryeelayaasha ay bixiso Xarunta Kheyraadka Gabowga & Naafada (ADRC).
Waxaa loogu talagalay inay ka caawiso daryeelayaasha inay bilaabaan inay ka fikiraan waxa ay yihiin baahiyahooda. Waxay bixisaa dulmar kooban oo adeegyo ah oo la heli karo.
Awooweyaal / ayeeyayaal: Noqoshada waalid mar labaad
Tilmaanta bilowga safarka waalidnimada ayeeyooyinka. ADRC waxay halkaan u joogtaa inay ku caawiso.
Hagaha Daryeel bixiyaha
Xirfadlaha 'UCLA Caregiver Alzheimer' Jilayaasha dhaqanka doorka-ciyaarta oo waxay tusayaan talooyin sida daryeel bixiyayaashu uga jawaabi karaan iyaga. Fikradaha wax ku oolka ah iyo xalka xaaladaha maalinlaha ah. Fiidiyeyaasha badankood waa 5 daqiiqo dherer.
Kheyraadka Daryeel-bixiyeyaasha tooska ah
Liiska degellada leh macluumaad waxtar u leh daryeelayaasha. Dhammaan da ’kasta laga soo bilaabo carruurta iyo dadka waaweyn ee naafada ah ilaa dadka waayeelka ah ee dementia qaba. Fiidiyowyo waaweyn sidoo kale.
Khadka Caawinta & Macluumaadka hel211.org
Wac 211 ama gal khadka tooska ah si aad u hesho macluumaad, ilaha bulshada, iyo tixraacyada ku saabsan arrimaha kala duwan ee caafimaadka iyo adeegga aadanaha. Khabiiro ayaa diyaar u ah inay ka jawaabaan khadka caawinta 24 saacadood maalintii, toddobo maalmood usbuucii. Kheyraadka deegaanka iyo gobolka oo dhan.
Baadhitaanka Maskaxda ADRC
Soo ogow sida BILAASH, Fudud, toban daqiiqo oo ah Baaritaanka Maskaxda ay kaa caawin karto inaad ku sii jirtid caafimaadka maskaxdaada. Waxaa bixiya shaqaale tababaran oo ka tirsan ADRC, shaashadahaan waxaa lagu sameyn karaa xafiiskayaga ama gurigaaga.
Talooyinka Wada Xiriirka, Istaraatiijiyadaha, & Kheyraadka Muuqaalka
Kheyraadka fiidiyowga ee laga heli karo dib-u-dejinta xaaladaha adag, taxane daryeel-bixiye oo gaar u ah hagaajinta xiriirka, aaladaha wax ku oolka ah, iyo macluumaadka ku saabsan tababarka tooska ah ee daryeelayaasha qoyska.
Buug-yaraha Khabiirka Daryeelka 'Dementia'
U adeegida shaqsiyaadka, qoysaska, iyo bulshada, Khabiirka Daryeelka Cudurka Dementia ayaa kaa caawin kara wixii su'aalo ah ee ku saabsan waallida qoyskaaga ama guud ahaan Degmada Brown.
Dariiqa xiisaha leh ee aad ula bixi karto qofka aad jeceshahay ee leh xusuusta heerka hore ee luminta, deegaanka aqbala. Kafateeriyada billaha ah waxaa lagu shaqeeyaa waqtiyo iyo maalmo kala duwan usbuucii dhowr meelood oo waxaa ku jira nashaad iyo waqti lagu is dhexgalo.
Raadi Makhaayad Xusuuseed
Dhacdooyinka Cafe Xusuusta May
Dhacdooyinka Makhaayadda Xusuusta ee Juun
Welwelka Xusuusta: Talaabooyinka Xiga ee Imtixaan Dheeraad ah
Cilad hore ayaa horseedi karta daaweyn wanaagsan iyo tayada natiijooyinka nolosha, oo lagu daro xallinta walwalka layaabka leh, "Maxaa iga qaldan?" Waxay sidoo kale ku siin kartaa waqti dheeraad ah oo aad ku qorsheyso mustaqbalka, taasoo kuu oggolaaneysa inaad gaarto go'aanno ku saabsan daryeelka, qaabeynta nolosha, arrimaha dhaqaalaha iyo arrimaha sharciga, iyo arrimaha kale ee muhiimka ah.
Fahamka Dabeecadaha Asaasaqa
Akhlaaqda oo dhami waa wada xiriirka. Isbeddelada jireed ee maskaxda awgood, qofka waallida qaba mar dambe awood uma lahan inuu muujiyo baahidiisa, waxa uu doonayo, ama dareenkiisa. Taabadalkeed, qofka aad jeceshahay wuxuu adeegsan karaa dhaqankooda si uu ula xiriiro.
Tilmaanta Shaqaalaynta ee Naafada
Wuxuu sharraxayaa xulashooyinka shaqo ee ay ku jiraan macluumaadka ku saabsan kaalmada shaqo ee loogu talagalay dadka waaweyn, ruug-caddaayaasha, iyo dadka waaweyn ee naafada ah. Tusaalooyinka waa barnaamijyada Maareynta Amniga Bulshada ee Shaqooyinka, sida loo helo maalgalinta, tikniyoolajiyadda caawinta, iyo arrimaha sharciga iyo u doodista.
Macluumaadka iyo U doodista Dadka Naafada ah
Liiska ururada caawiya dadka naafada ah iyo qoysaskooda. Waxay ka caawiyaan helitaanka adeegyada, tikniyoolajiyadda caawinta, iyo kooxaha taageerada marka lagu daro bixinta waxbarashada iyo u doodista arrimaha la xiriira naafonimada, iyo waxyaabo kaloo badan.
Qalabka Caafimaadka ee Joogtada ah - Ku tabaruca - Liistada la Iibsaday
Liiska ilaha deeqaha qalabka aad haysato ama aad ku iibsato qalabka. Tusaalayaashu waa aaladaha caawiya musqusha, qolka jiifka, socod lugeeyaasha, bakooradda, kuraasta curyaamiinta, iwm. Haddii aad u baahan tahay inaad sahamiso xulashooyin dheeri ah ka wac ADRC lambarka (920) 448-4300 si aad gargaar u hesho.
Bixiyeyaasha Caafimaadka Guriga
Barnaamijyada loogu talagalay Shaqsiyaadka Naafada ah
Liiska ururada u adeega dadka naafada ah barnaamijyada ka caawiya sidii ay ugu firfircoonaan lahaayeen una baran lahaayeen xirfado cusub.
Xulashada Nasinta ee Dadka Baahiyaha Gaarka ah qaba
Wuxuu sharaxayaa waxa nasintu tahay, sababta ay muhiim u tahay, xulashooyinka nasashada ee la heli karo, iyo halka laga helo caawimaad si loo kala saaro xulashooyinkaas.
Wakaaladda u adeegta shaqsiyaadka naafada ah. Adeegyada waxaa ka mid ah faragelinta, shaqada, adeegyada maalinta, iyo inbadan. 1673 Dousman St. Green Bay, WI. (920) 498-2599
Waxay bixisaa jimicsi biyo, adeegyo daaweyn, adeegyo maalmeed oo qaangaar ah, daryeelka carruurta, u doodista, iyo macluumaadka.
Waxay u fidisaa adeegyo kala duwan dadka waaweyn iyo dadka waaweyn ee naafada ah. Waallida, adeegyada maalinta dadka waaweyn, tababarka iyo shaqada, baxnaaninta, gaadiidka, iyo inbadan. 2900 Curry Ln. Green Bay, WI. (920) 468-1161
Xulashada Nolol Madax-bannaan
Guryaha iyo xafiiska tusaalooyinka naafada ah. Ku hel gacmo khibrad tiknoolajiyada caawinta iyo qalabka la qabsiga. Waxay bixisaa u-qareemid, taageero asxaabta, macluumaad, iyo gudbin. 555 Kooxda Naadiga Rd. Green Bay, WI. (920) 590-0500
Fursadaha Daryeelka Cagaha ee Degmada Brown
Liiska bukaan socod eegtada iyo fursadaha daryeelka cagaha ee guriga gudihiisa ee deganayaasha Gobolka Brown.
Barnaamijka Cuntada Guriga ee ADRC
Xaashida la daabaci karo ee ku saabsan barnaamijka cuntada guriga lagu bixiyo.
Cuntada Guri-galka ah Codsiga khadka tooska ah
Hubso codsiyada khadka tooska ah si ay ugu adeegsadaan xirfadlayaal tixraacyo loogu talagalay Barnaamijka Cunnada Guryaha ee ADRC. Shakhsiyaadka xiiseynaya Cunnooyinka Guryaha Dib-u-dhaca waxay wacaan (920) 448-4300.
Referencia para Comidas en Casa (Español)
Esta forma segura es para ser usada por profesionales para referir a clientes al programa de comidas en casa. Las personas que estén interesadas en las comidas llamen (920) 448-6462.
Xulashada Daryeelka Guriga
Sharaxaada iyo tilmaamaha xulashada noocyada kala duwan ee daryeelka guriga.
Liiska Hay'adaha Daryeelka Guriga
Liiska wakaaladaha daryeelka guriga ee shirkadaha bixiya shatiga aan shatiga lahayn iyo kuwa aan shatiga lahayn, macluumaadka xiriirka iyo macluumaadka adeegga
Daryeelka Caafimaadka ee Shatiga leh
Daryeel Aan Ruqsad Laheyn
Liistada Hay'ada Cisbitaalka
Liiska wakaaladaha bixiya daryeelka cosbitaalka iyo xannuunada daawaynta. Waxaa ku jira macluumaadka xiriirka iyo adeegga.
Kaalmada Caafimaadka (Medicaid) Wakaaladaha Daryeelka Shaqsiyeed
Liiska hay'adaha daryeelka guriga ee bixiya Caawimaada Caafimaadka (MA).
Nidaamyada Waxqabadka Degdegga ee Shaqsiyeed
Liis gareynta bixiyeyaasha nidaamka kajawaabidda xaaladda degdegga ah, aka Nolosha
Buugyaraha Ikhtiyaarka Guryaha
Sharraxaadda noocyada kala duwan ee guryaha, tixgelinta dib u habeyn guri. Macluumaadka kaa caawinaya inaad gaarto go'aannada ku saabsan guuritaanka suurtagalka ah.
Liiska Guryaha ee Dowlada Itobiya laga Bixiyo
Guryaha la helo kaabayaasha dowladda dhexe si ay uga dhigaan ijaarka mid awood u leh deganayaashooda. Deganayaashu waa inay awoodaan inay si madaxbanaan u noolaadaan ama ay awoodaan inay kiraystaan ​​caawimaada ay soo galaan.
Liiska Guriyeynta Qoyska oo ay Fidralku Kaabto
Guryo iyo Guryo-magaalo oo qaata kaalmada federaalka si kirada looga dhigo mid ay awoodi karaan dadka deggan. Waxaa ku jira liiska shuruudaha ugu yar ee xaq u yeelashada.
Liiska Guryaha Madaxa Bannaan
Liiska guryaha dadka da'doodu tahay 55 iyo ka weyn. Waa inaad ku noolaato kaligaa ama aad kireyso caawinaad hadba sida loogu baahdo.
Nolosha Caawinta ah: Liiska Isku-Darka Guryaha Daryeelka Deegaanka (RCAC)
RCACs waa la diiwangeliyay ama la sharciyeynayaa inay hoy siiso dadka iyagu keligood ku noolaan kara laakiin ka faa iidaysan doona illaa 28 saacadood usbuucii oo kaalmayn ah baahiyaha maalinlaha ah.
Nolosha Caawinta ah: Liiska Xarunta Degganeed ee Ku Salaysan Beesha (CBRF)
CBRFs waa guryo ruqsad u leh gobolka oo loogu talagalay shan ama in ka badan oo qaangaar ah oo aan lala xiriirin oo u baahan kaalmada nolol maalmeedka.
Liiska Guryaha Kalkaalinta
Guryaha waayeelka waxaa loogu talagalay dadka ka soo kabanaya jirada ama u baahan taageerada muddada-dheer iyo daryeelka kalkaalinta.
Macluumaadka Sahaminta Guryaha Kalkaalinta ah
Macluumaadka taarikhda sahaminta ee loogu talagalay guryaha kalkaalinta ah ee ay sameeyeen Qeybta Dammaanad Qaadka Talo ee Waaxda Adeegyada Caafimaadka ee WI.
Qalabka Raadinta Guryaha ee Wisconsin
Adeeg fudud oo ay heli karaan qof kasta oo raadinaya guri ama aqal uu ka kireysto Wisconsin. Isticmaal raadinta khadka tooska ah ama wicitaan bilaash ah 1-877-428-8844. Xulo magaalo si aad u hesho liiska guryaha. Guji guri si aad u hesho macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan kharashka iyo adeegyada. Waa u bilaash kireystayaasha inay baaraan iyo mulkiilayaasha inay soo gudbiyaan liisaska.
Baro barnaamijyada iyo u-qalmitaanka. Codso khadka tooska ah.
Macluumaad ku saabsan barnaamijyada kala duwan ee loogu talagalay dadka ku cusub Medicaid, xubnaha hadda jira, iyo la-hawlgalayaasha / bixiyeyaasha.
Foomamka, tilmaamaha, iyo daabacaadaha xubnaha cusub iyo kuwa hadda jira ee Medicaid.
Kaabista Medicare ama Medigap Siyaasadaha Su'aalaha
Khadka Caawinta Medigap ee Wisconsin: 1-800-242-1060
Meel wanaagsan oo laga helo macluumaadka ku saabsan Medicare-ka cusub, dhakhso u noqon doono iyo qaatayaasha hadda iyo daryeelayaashooda.
Foomamka loo abaabulay xaaladaha si lagaaga caawiyo inaad hesho foomka ku habboon xaaladdaada shaqsiyeed.
Buug-yaraha Medicare & You
Waxaa siiya CMS sanad walba dhamaan kaqeybgalayaasha Medicare. Buugyarahani wuxuu siinayaa macluumaad badan oo qiimo leh oo ku saabsan Medicare. Ku hel buug-yaraha qaabab kala duwan (maqal, elektiroonig, iwm.) Iyo luqado aan Ingiriis ahayn.
Ciidamada Ilaalada Sarkaalka Sare ee Wisconsin (SMP)
Wac 888-818-2611 ama emayl: smp-wi@gwar.org. Caawinta qaataha Medicare si looga hortago, loo ogaado, loona soo sheego khiyaanada Medicare, khaladaadka, iyo xadgudubka.
Kheyraadka La-Talinta ee Bulshada Degmada Brown
Liiska bixiyeyaasha la-talinta oo leh macluumaad ku saabsan adeegyada la bixiyo iyo noocyada lacag-bixinta ee la aqbalay (Medicaid, Medicare, qiyaasta khidmadda sicirka, iwm.)
Wuxuu sharraxayaa hannaanka ballanqaadka shacabka. Waxaa loogu talagalay dadka la halgamaya caawinta qofkii aad jeceshahay ee qaba cudurka dhimirka si ay u fahmaan sida ay ugu shaqeyso go'aan ka gaadhista.
Kooxaha Taageerada Caafimaadka Maskaxda ee Degmada Brown
Liistada kooxaha taageerada oo la kulma waqtiyo kala duwan, maalmo, goobo iyo daboola mowduucyo kala duwan. Kooxo loogu talagalay shaqsiyaadka marka lagu daro ehelka iyo asxaabta.
Caawinta Caafimaadka Maskaxda ee Degmada Brown
Wuxuu sharraxayaa adeegyada iyo daaweynta laga helo Brown County marka lagu daro ururada bixiya u-doodista, waxbarashada, iyo taageerada.
Kheyraadka Kajawaabida Qaylada Caawinta - Ka Hortagga Isdilka
Xaashiyaha ka caawiya aqoonsashada qodobbada halista iyo bixinta macluumaadka ku saabsan barnaamijyada iyo adeegyada lagu caawinayo ka-hortagga is-dilka. Waxaa diyaariyay Kooxda Ka Hortagga Is Dila ee Brown County Wisconsin.
Macluumaadka Kooxaha Taageerada
Macluumaadka Kooxda Taageerada Virtual (onlayn).
Gaadiidka Baska ee Green Bay
Green Bay Metro waxay bixisaa adeegyo kooban oo wax laga beddeli karo.
Khadka Tooska ah ee Green Bay
Green Bay Metro waxay hadda bixinaysaa GBM On Demand. Waxay bixisaa raacid la wadaago oo la awoodi karo oo lagu tago xarumaha muhiimka ee gaadiidka, meelaha ganacsiga iyo caafimaadka loogu talagalay. Soo gal adoo adeegsanaya barnaamij la soo dejiyey ama u wac kuwa aan casriga lahayn.
Buug-yaraha leh sharaxaadda adeegga gaadiidka ayaa kaa caawinaya sidii aad u qorsheyn lahayd si aad u hesho halka aad rabto inaad aado.
Liiska Gaadiidka & Kheyraadka
Liiska Maareynta Dhaqdhaqaaqa ee xulashooyinka gaadiidka & ilaha Gobolka Brown
Howlaha Ciiddanka Birmadka
Buug-yare leh adeegyo, manfacyo, iyo ilo loogu talagalay halyeeyooyinka ka hawl gala Brown County.
Kala guurka dhalinyarada Dugsiga Sare
Foomka Gudbinta Dhalinyarada ee ADRC
Si ay ugu adeegsadaan xirfadlayaal inay u gudbiyaan ardayda dugsiga sare ee jira 17 sano 6 bilood ilaa ADRC.
Ka-guurka Dugsiga Sare - Bilaabmo Cusub
Buug-yarahan kaa caawinaya inaad fahamto go'aannada u baahan in la sameeyo inta lagu jiro xilliga kala-guurka. Waxaa ku jira liistada ilaha iyo liisaska hubinta si loo bilaabo qorshaynta. Shaqaalaha ADRC waxay had iyo jeer halkan u joogaan inay ku caawiyaan.
WI FACETS waa Wisconsin Xarunta Caawinta Qoyska ee Waxbarashada, Tababbarka, iyo Taageerada
Websaydhka waxaa ka buuxa macluumaad loogu talagalay waalidiinta iyo dadka kale ee daryeela oo taageera carruurta naafada ah.
Furitaanka Albaabada Is-Go'aansiga
Buug yar oo kaa caawinaya qorsheynta nolosha dugsiga sare kadib ee ardayda, la-taliyayaasha dugsiga, macallimiinta, iyo waalidiinta / dadka ardayda masuulka ka ah. Waxaa soo saaray Waaxda Wax Barashada ee Gobolka Wisconsin.
In Albaabada loo Furo Waxbarashada Sare iyo Tababarka
Buug-yarahan kaa caawinaya qorsheynta Waxbarashada iyo Tababbarka dugsiga sare kadib ee ardayda, la-taliyayaasha dugsiga, macallimiinta, iyo waalidiinta / dadka ardayda masuulka ka ah. Waxaa soo saaray Waaxda Wax Barashada ee Gobolka Wisconsin.
Furitaanka Albaabada Shaqada
Buug-yarahan kaa caawinaya qorsheynta shaqaalaynta dugsiga sare kadib ee ardayda, la-taliyayaasha dugsiga, macallimiinta, iyo waalidiinta / dadka ardayda masuulka ka ah. Waxaa soo saaray Waaxda Wax Barashada ee Gobolka Wisconsin.